c box မှာ smilies တွေ ထည့်ချင်လို ့။ — MYSTERY ZILLION
c box မှာ smilies တွေ ထည့်ချင်လို ့။
ကျွန်တော် ဘလော့ မှာ c box လေးမှာ smilies တွေ ထည် ့ချင်လို ့ပါ။ကျွန်တော် c box လေးမှာ smilies ဆိုတာ မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော် google မှာလဲ ရှာ ပြီးလုပ်ပါသေးတယ် ။ဒါမဲ့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ cbox က control panel မှာ smilies ကို save ရင် ကိုယ်ဘလော့က c box မှာ smilies တွေ သုံးလို ့ရပြီလားဟင်။ကျွန်တော် save လုပ်ပါတယ် ။မရဘူးဖြစ်နေလို ့ပါ။အဲ ့ဒါ ဘယ်လို ထည် ့ရမလဲပြောပြပေးပါဗျာ။ဘယ်နေရာတွေမှာ ပြန်ပြင်ပေးရမလဲဟင်။ကျွန်တော် က ပိန်းလို ့ပါ။:2:
ကိုစေတန်ရေးထားတဲ. ဘလော.လုပ်နည်း စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
ပြီးရင်option -simily ထဲ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးမှ အကိုလိုချင်တဲ. အရုပ်လေးတွေ ရှာပြီးလဲလိုက်ပါ။
ပြီးရင် save မှတ်ပြီးထွက်ခဲ.ပေါ.
So Thanks I got it~! :5::5::5: